Cartoon Box | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 295
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – မြို့မေတ္တာခံယူသူဂျီးပေမို့ …
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – မြို့မေတ္တာခံယူသူဂျီးပေမို့ … ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ (Burmese smokes in front of Regime’s Congress man coz they cannot stand their face – Cartoon Ku Mo Jo) No tags for this post.
ကာတွန်း – ဆလိုင်းစွမ်းပီ ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ကာတွန်းစောငို – ဘယ်သူ့အတွက်လဲ …
ကာတွန်းစောငို – ဘယ်သူ့အတွက်လဲ … ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ (Foreign Investment in Burma, for who? – Cartoon Saw Ngo) No tags for this post.
ကာတွန်း – ဆလိုင်းစွမ်းပီ ဇန်န၀ါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ကာတွန်း စောငို – မတူရင် မထိနဲ့
ကာတွန်း စောငို – မတူရင် မထိနဲ့ ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ (Rumors say China is backing Wa Ethnic, so Burmese Regime, Beware!!!) – Cartoon by Saw Ngo No tags for this post.
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – မျိုးဆက်သစ်တွေ အဖိုးမတက်ဘဲ ဖြစ်မှာစိုး
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – မျိုးဆက်သစ်တွေ အဖိုးမတက်ဘဲ ဖြစ်မှာစိုး ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ Cartoon Ku Mo Jo – Spare the new generation from abuse of Burmese Regime No tags for this post.
ကာတွန်း – လိုင်လုဏ် ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ Categories: No tags for this post.
ကာတွန်း – ဆလိုင်းစွမ်းပီ ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ကာတွန်းစောငို – နိုင်ငံတော်စီမံတာကို နားထောင်မှပေါ့
ကာတွန်းစောငို – နိုင်ငံတော်စီမံတာကို နားထောင်မှပေါ့ ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၃ Carton Saw Ngo – Regime’s Project good for Regime not for People? No tags for this post.
ကာတွန်းစောငို – တရားရေးမဏ္ဍိုင် သူတို့ပဲ ပိုင်တယ်
ကာတွန်းစောငို – တရားရေးမဏ္ဍိုင် သူတို့ပဲ ပိုင်တယ် ဇန်န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၃ The Law belongs to them in Burma – Cartoon Saw Ngo No tags for this post.
Page 295 of 344«1...293294295296297...344»
ကာတွန်း ဘီရုမာ - ဟက်ပီးနယူးယီးယား
ကာတွန်း ညီပုချေ ● ပထမတွေချည်းပဲ ...
ကာတွန်း OKKW ● ဒီမိုကရေစီ အုတ်မြစ်
ကာတွန်း စောငို - ပိုလျံ နေတဲ့ ...